Amnesty International oo dowladda Kenya ugu baaqday in joojiso raafka lagu qabqabanayo shaqaalaha aan sharciga dalkaas ku joogin – Madal Furan
Hoy > Warka > Amnesty International oo dowladda Kenya ugu baaqday in joojiso raafka lagu qabqabanayo shaqaalaha aan sharciga dalkaas ku joogin
Amnesty International oo dowladda Kenya ugu baaqday in joojiso raafka lagu qabqabanayo shaqaalaha aan sharciga dalkaas ku joogin
Nayroobi (Madal Furan) – Hey’adda caalamiga ah ee Xuquuqda Aadmiga ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Kenya in ay ka tanaasusho bandowga haatan soconaya ee lagu qabqabayo shaqaalaha soo galootiga ah ee dalka Kenya.
Hey’adani ayaa dooneysa in meesha laga saaro lambarka taleefan ee 0745660151 kaasi oo dowladdu dalbatay in qofkii arkaa qof ajnbai ah oo dalka ka shaqeynaya in uu ku soo wargeliyo madaxda.
Amnesty International ayaa tiri: “Lambarkaan waa in sida ugu dhaqsiyaha badan shaqadiisa loo joojiyaa lana demiyaa. Dhamaan dadka lagu xiray howlgallada lagu ugaarsanayo dadkana waa in xiritaankooda dib u eegis lagu sameeyaa,” sidaasi waxaa sheegay Seif Magango oo ah sarkaal hey’addaasi ka tirsan.
Ku xigeenka hey’adda Amnesty International ee Bariga Afrika ayaa sheegay in hey’addu aad uga welwelsan tahay in muwaadiniinta lagu dhiirigelinayo in ay wacaan taleefan si ay u wargeliyaan kiisas-ka muhaajiriinta laga shakisan in aysan heysanin waraaqo ama dokumenti.
Waxa uu sheegay in ficilka madaxda dalka lagu bartilmaameedsanayo muhaajiriinta kuwaasi oo badankood ah qaxooti iyo dad magan-gelyo doon ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli boqolaal muhaajiriin, qaxooti iyo dad magangeliyo doon ah la soo qabqabtay iyadoo lagu xir xiray meelo kala gedisan oo dalka ah.
Dhicitaanka dadkani loo dhacay ayaa dalka ka socday wixii ka soo bilowday 27-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Agoosto markii waaxda Socdaalka dalku ay diyaarisay taleefan lambar kaasi oo muwaadiniinta ugu baaqayey in ay taleefankaasi ku soo wargeliyaan ajnabiga sida qaldan wadanka u jooga.
“Tani waxa ay atahay mid laga yaabo in ay shido dabka jinsi naceybka ama loo yaqaan (xenophobia) ee lagu faquuqayo dadka ajnabiga ah ee dalka ka shaqeysta, dadka qaxootiga ah iyo soo galootiga,” ayaa uu yiri Mr. Seif oo u hadlay Amesty International.
Sarkaalka Amnesty u hadlay ayaa sheegay in uu doonayo in dadka ay arrintani saameynta ku yaalatay arrintani la keeno maxkamad si loo cadeeyo in ficilka dowladdu ay qaadeyso uu yahay mid sharci ah, ama muhiimad weyn leh isla markaasina loo siman yahay.
“Dhammaan Qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ee lagu xir xiray howlgalkan ay crackdown waa in la sii daayaa lamana musaafurin karo dadkaasi” ayaa uu yiri sarkaalku.
Bishii Maajo 21-keedii ayaa madaxda dalka waxa ay bilaabeen hanaan warqadaha shaqada loo weydiinayo shaqaalaha ajnabiga ah ee dalka ku sugan.
Bishii Agooosto 24-keedii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Fred Matiang’i waxa uu ku amray waaxda socdaalka dalka iyo xoogagga amniga iyo ay soo xiraan xabsiga ku tuuraan isla markaasina soo galootiga musaafuriyaan wixii ka bilowda bisha Nofeembar 30-keeda.
Xaafado kala duwan oo ay ka mid yihiin Rongai, Mwiki, Pangani, Ngong, Kasarani, iyo Githurai ayaa loo dhacay habeenimo iyadoo la raacayo wareegtadaasi. Bandowga la saaray xaafadaha ayaa sidoo kale ka hirgalay degmooyinka Bungoma, Nyeri, Eldoret, iyo Nakuru.
Sarkaalka lagu magacaabo Seif ee u hadlay hey’adda Amnesty ayaa yiri: “Amnesty International waxyaalaha ay so ogaatay waxa ay muujinayaan in dad ka yimid wadammada DRC Koongo, Itoobiya, Soomaaliya, iyo wadanka Koonfurta Suudaan ay howshani saameyn weyn ku yeelatay,”.
Waxa uu cambaareeyay xaaladaha dadkani looga watey guryahooda, iyada oo loogu galay masaajidyo iyo goobo macbad isla markaasina xabsiga loo taxaabay kuwooda aan heysanin waraaqaha.
Isaga oo cod dheer ku dhawaaqay yirina: “Dowladda Kenya waa in ay qulqulinta dad ka soo cararay dagaallo iyo xukunno naftooda lagu dili lahaa oo ay dalalkooda uga soo hayaameen, halkii laga rabey inay dadkaasi badbaadiso.”
Waxa uu sidoo kale carabaabay arday u dhalatay Koonfurta Suudaan oo howlgalkaasi uu saameeyn ku yeeshay.
SAWIRO:- R/wasaare Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u kictimay Dalka Norway
SAWIRO:- Ra’iisul Wasaaraha oo xalay ka qeyb galay Munaasabadda 20-guuradii aas aaska Puntland
Xubin muhiim ah oo ka tirsan Daacishta Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay.